सुन्दर हुने ध्याउन्नमा २ सय पटक प्लास्टिक सर्जरी – उज्यालो नेपाल Ujayaalo
सुन्दर हुन मन कुन युवतीलाई नहोला र ? कतिपय युवतीहरुमा सुन्दर देखिने नशा यति धेरै हुन्छ कि उनीहरुलाई प्लास्टिक सर्जरी गराउने लत नै लागेको हुन्छ ।
यस्तै एउटा नाम हो, स्टार डेलगुडाइस । बेलायतको लिचफिल्डमा जन्मिएकी २८ वर्षकी डेलगुडाइसले अहिलेसम्म लाखौँ पाउण्ड रकम प्लास्टिक सर्जरीमा खर्च गरिसकेकी छन् । उनले पहिलोपटक १७ वर्षकी छँदा प्लास्टिक सर्जरी गराएकी थिइन् र अहिलेसम्म जिउका विभिन्न अंगको गरी २ सयपटक प्लास्टिक सर्जरी गराइसकेकी छन् ।
उनले आफ्नो नितम्ब प्रत्यारोपण गराएकी छन् । जसका कारण उनको नितम्ब ठूलो भएको छ र बस्न पनि मुस्किल पर्दछ ।
आफ्नो प्लास्टिक सर्जरीको लतको मुख्य कारक उनी आफ्ना बाउआमालाई मान्छिन् । बाबुआमाले नै लगातार दबाव दिइरहेकाले आफूले पटक–पटक सर्जरी गराएको उनको भनाइ छ । बाबु–आमाले आफूलाई कुरुप भन्ने गरेको र सुन्दर बन्नका लागि प्लास्टिक सर्जरी गर्न दबाव दिएको उनले बताइन् ।हालसम्म २ सय पटक प्लास्टिक सर्जरी गर्दा झण्डै २ लाख ३० हजार पाउण्ड खर्च भएको छ । उनले ५ पटक ओठको, ४ पटक नाकको सर्जरी गराएकी छन् । त्यस्तै नाक, बंगरा, वक्षस्थल आदि धेरै अंगको सर्जरी गराएकी छन् । हुँदा–हुँदा उनले ३ पटक आफ्नो योनीको सर्जरी पनि गराइन् ।
हालै उनले ७ घण्टाको शल्यक्रिया गरी आफ्नो नितम्ब प्रत्यारोपण गराइन् । नितम्ब प्रत्यारोपणपछि उनलाई निकै पीडा भइरहेको छ र उक्त पीडा कम गर्न थेरापीको सहयोग लिने गरेकी छन् ।सानोमा उनको नाम स्टेसी थियो र अहिले उनले नाम बदलेर स्टार बनाएकी छन् । आफूलाई राम्रो बनाउन उनी जेसुकै गर्न तयार छिन् ।
इटहरी, विराटनगर र इलामबाट पनि स्मार्ट लाइसेन्स !
उभौली साकेला शिली प्रदर्शनी